Homeराष्ट्रिय खबरप्रधानमन्त्रीज्यू ! यी तस्बिर हेरेपछि तपाइँ ढु,क्कले निदाउन सक्नु हुन्छ ?
बिकाश बखुन्छेँ, काठमाडौं । मुलुकमा कम्युनिष्टको सरकार छ । मजदुर र गरिब जनताको मु,क्तिका लागि भन्दै सश,स्त्र यु,द्धदेखि विभिन्न आ,न्दोलनमा सहभागी हुँदै जेलनेल भोगेका नेताहरु सहभागी पार्टी नेकपाले सरकार चलाइरहेको छ । केन्द्रमा मात्रै होइन ६ वटा प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहमा नेकपाकै सरकार छ । दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त सरकारको नेतृत्व १४ वर्ष जे,ल जीवन बिताएका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिएका छन् ।
अहिल मुलुक सं,कटको अवस्थामा छ । विश्वभर कोरोनाभाइरस (कोभिड १९)को महामा,रीको असर नेपालमा पनि परेको छ । हालसम्म नेपालका ३१ जना कोरोनाभाइरस सं,क्रमित फेला परेका छन् । कोरोनाभाइरसको सं,क्रमण नफैलियोस् भनेर सरकारले २७ दिनदेखि लकडाउन गरेको छ । यसको विकल्प पनि छैन । तर, गरिब जनताको कोरोनाभाइरसले भन्दा भोकै म,र्न लागेको अवस्था जान्दाजान्दै सरकार उनीहरुको प्रा,ण जोगाउन निर्देशनमा मात्रै समिति भएको छ ।
आइतबार बिहान करिब ११ बजे, भक्तपुरको गठ्ठाघर चोकमा केही मानिसहरु लाम लागेर हिँडिरहेका थिए । उनीहरुको साथ स्वयम् सेवकको पोसाक लगाएका केही मानिस पनि थिए । ती स्वयम् सेवकले उनीहरुलाई सामाजिक दूरी कायम राख्न भन्दै थिए । टन्टालपुर घाममा हिँडेर आएका ती थकित अनुहारहरुले सामाजिक दूरीको अर्थ बुझेनन् या सुनेनन् । त्यसपछि स्वयम् सेवक पोशाक लगाएका एक पुरुष अलि अलि टाढा उभिनूस् भन्दै सिकाउँदै थिए ।
गठ्ठाघरको द बर्गर हाउस र भक्तपुर खेलकुद विकास समितिले संयुक्त रुपमा खाना खुवाउन उनीहरुलाई लाम लगाइरहेका थिए । लाममा बसेकाहरु घण्टौं हिँडेर आएका जस्ता देखिन्थे । थ,कित शरीर, भोको पेट र तिर्खाएर बोल्न नसकेका उनीहरु एक छाकको खाना लाइनमा बसेका थिए ।
उनीहरु कोही पनि नाम बताइहाल्न चाहँदैन थे । नाम सोध्दा उनीहरु हाँसेर टारिदिन्थे । नाम नबताए पनि उनीहरु खाने व्यवस्था नभएपछि आफ्नो घर हिँडेका थिए । भर्खरै ज,न्मेका बच्चादेखि अ,धवैंशे उमेर समूहका उनीहरु खाने व्यवस्था नभएपछि घर जान हिँडेका हुन् । कोही इट्टाभट्टाबाट खाना खान आएका थिए ।
काठमाडौंको नारायणथानबाट हिँडेर आएका एक पुरुष भन्दै थिए, काम छैन, काम नभएपछि पैसा भएन, पैसा पनि नभएपछि खाने सामान नभएकाले घर हिँडेको ।’ नारायणथानबाट हिँडेर गठ्ठाघर आइपुगेका ती पुरुष सप्तरी जान लागेका हुन् । टन्टलापुर घाममा हिँडेका उनको शरीरबाट पसिना बगिरहेको थियो । एक छाक खाना खुवाउने भएपछि लाम लागेका उनीमा भरे र भोलिको छाकको चिन्ता त छैँदै थियो, त्यो भन्दा बढी सप्तरीसम्म हिँड्नु पर्ने बाध्यताले धेरै चिन्तित देखिन्थे ।
उनीमात्रै होइनन्, त्यहाँ उभिएका धेरै नै उपत्यका छाड्न त्यहाँ आइपुगेका थिए । केही महिनाको सन्तान बोकेर आइपुगेका एक जोडी धनकुटासम्म जाने तयारीमा थिए । नयाँ बसपार्कबाट हिँडेर आएका उनीहरु भन्दै थिए, ‘यहाँबाट प्रहरीले लगिदिन्छु भनेको छ, लगेन भने हिँडेरै भए पनि जान्छौं ।’ यति लामो बाटो बच्चा बोकेरै कसरी धनकुटा पुग्नुहुन्छ भनेर जिज्ञासा राख्दा बच्चा बोकिरहेका पुरुषले निराश हुँदै जवाफ दिए, ‘के गर्नु खाने चिजै छैन, पैसा छैन, जाने रहर त कहाँ हो र , बा,ध्यताले हिँडेका हौं । ’ सँगै रहेका अर्का एक पुरुषले भने, के गर्नु यहाँ कसैले केही दिएनन् । राहत हुनेले पाए हामीले राहत पनि पाएनौं अनि घर जान हिँडेको ।’
यी प्रतिनिधि पात्र र घ,टना हो । केही दिनयता यसरी उपत्यका छाडेर हिँड्नको ल,र्काे रो,किएको छैन । भो,कोपेट र बच्चाले लकडाउन भन्दैन । सरकारले यस्ता मानिसलाई राहत दिन बारम्बार निर्देशन दिएको सुनिए पनि खान नपाएकैभरमा राजधानी छाड्ने मानिसको लाम टु,ट्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उपत्यका छाडेर जानेलाई रोक्न निर्देशन दिँदै खाने व्यवस्था गर्न भनेका छन् । तर, वास्तविक राहत पाउनेले पाएका छैनन् । कसैले एक छाक खुवाएकाभरमा हप्तौंसम्म पेट भरिन्नँ भन्ने कुरा बुझेर उनीहरु घर हिँडेका हुन् । सरकारले न उनीहरुलाई घर जान दिन्छ, न यहीँ खाने व्यवस्था गरिदिन्छ । त्यसै भन्दै थिए, सिन्धुली जान हिँडेका एक पुरुषले, ‘हामी कोरोनाले भन्दा पनि गरिबी र खान नपाएरै म,र्ने भयौं ।’-क्यानडानेपालबाट
tadalafil coupon – tadalafil generic online tadalafil vs sildenafil
propecia – site before and after finasteride
roman finasteride – http://propechl.com/ finasteride price
tadalafil buy online – what is the difference between tadalafil and cialis tadalafil canadian pharmacy
letter editing – customized essay paper help
Piijhx – http://virviaga.com/ viagra buy
Rvxjwm – stromectol nz Wkqdym ytwlbm
Sqkdep – cialis le moins cher Cbqbrv cgfaug
Blmhkl – furosempi.com Cfzcir vkvwon
buy amoxicillin without prescription amoxicillin generic – amoxicillin medicine over the counter
prednisone taper chart prednisone dosage for dogs mg/kg what is the medicine prednisone
prednisone and covid what does prednisone look like what if i missadose of prednisone
furosemide 20mg otc lasix furosemide or lasix is used as why slow iv push lasix
bactrim vs amoxicillin generic amoxicillin cost methotrexate and amoxicillin amoxicillin with potassium
ivermectin fleas ivermectin ebay ivermectin for mites in humans what is ivermectin for dog med
goat ivermectin dose ivermectin coronavirus ivermectin pour on for horses bought ivermectin how much should i take
ivermectin online stromectol tablets for humans ivermectin pour on for chickens how to buy ivermectin for humans
viagra und blutverdГјnner viagra rezeptfrei viagra online kaufen erfahrungen ab wann wirkt viagra
metformin dosages buy metformin 500mg tablets what does metformin do? what is the half life of metformin
prednisone 40 mg where can you buy prednisone withoutaprescription does prednisone make you jittery when prednisone stops working in canine lymphoma
cialis soft acheter cialis5mg quel est meilleur generique cialis cialis 20 mg ou viagra
ivermectin half life ivermectin where to buy where can i buy ivermectin for dogs how to give your guinea pig ivermectin
what does levitra look like levitra 20mg tablet order levitra online levitra 10 mg tablet
plaquenil diarrhea hydroxychloroquine sulfate tablets diagnosis code for plaquenil eye exam how long does plaquenil take to kick in
ventolin vs xopenex ventolin generic price ventolin hfa inh w dos ctr 200puffs how much isaventolin inhaler without insurance
cialis espagne generique de cialis acheter cialis payer avec paypal ou acheter du cialis en france sans ordonnance
viagra cubano viagra ricetta bianca le donne possono prendere il viagra quanto costa il viagra?
cialis paypal can i buy cialis in spain cialis generico5mg espaГ±a como partir una pastilla de cialis
viagra naturel plante viagra generique pas cher en france acheter viagra et payer avec paypal comment acheter du viagra en france
cialis lilly comprar cialis sin receta en espaГ±a precio cialis generico en farmacia que pasa si tomas cialis caducado
viagra fГјr frauen acheter viagra c est quoi le viagra acheter cialis ou viagra
prise de cialis cialis 20mg generique brand cialis (tadalafil) cialis vente libre ou ordonnance
cialis diabetes cialis manufacturer viagra and alcohol side effects viagra how it works
is viagra prescription cost of sildenafil can you buy viagra fromachemist what does viagra do if you don’t need it
milanuncios cialis valencia requiere receta medica cialis comprar cialis original5mg en espaГ±a para que sirve cialis 10 mg
plaquenil sun chloroquine drug can i take plaquenil with cheratussin ac comment from people who take plaquenil for sjogren
viagra 100mg cost what is viagra pills how to buy cialis safely online what is cialis tablets used for
viagra funny cialis 5mg price in australia cialis 5mg price chemist warehouse how does cialis work
order viagra uk can i buy cialis online usa easy way to get viagra how long does levitra take to start working
kamagra jelly online viagra australia without prescription which is better viagra or cialis where to buy viagra online without prescription
viagra contrareembolso espaГ±a viagra generico contrareembolso viagra se puede comprar sin receta como hace mas efecto la viagra